waafaqid P3DV4 et V5
waafaqid P3DV4 et V5 Bilood 2 2 todobaad ka hor #1777
Waa salaaman tihiin shaqaalaha Rikoooo,
Waan ka raali galinayaa haddii qoraalkani labanlaab yahay kan aan ku dhajiyay barta Frenc, laakiin wax jawaab ah kama helin ...
Bogagga soo degsan ee xirmada diyaaradda P3D, Waxaan arkay in qaar badan oo ka mid ahi ay hadda la jaan qaadayaan P3DV5.
Kuwo badan oo iyaga ka mid ah ayaa laga rakibay P3DV4.5 sidaas Waxaan doonayay inaan sidoo kale ka helo meesha P3DV5.
Waxaan hoos udhigay nooca "cusub" ee xirmada (mahadsanid ikhtiyaarka Jumbo) oo waxaan isku dayay inaan ku rakibo hoosta P3DV5.
Rakibahii wuxuu ogaaday labada nooc ee P3D, sidaas Waan doortay P3DV5 si loo socodsiiyo rakibaadda waxaanan helay farriin "xirmadaan waa la ogaadey waana in la rakibo kahor... "
Waxaan rabaa inaan sii wado P3DV4
IYO Waxaan rabaa inaan ka dhigo mid la heli karo P3DV5
Ma jiraan macno lagu helo xirmo (ama diyaarad, ama muuqaal ...) isla mar ahaantaana ku hoos jira noocyada V4 iyo V5 ?
Waad ku mahadsan tahay xiisaha aad siin doonto codsigeyga.
waafaqid P3DV4 et V5 Bilood 2 2 todobaad ka hor #1778
Ma ogi haddii ay jiraan kala duwanaansho badan oo u dhexeeya V4 iyo V5. Marka laga reebo dhawr tuducyo ah, oo ah waxa aan ka akhriyey dib-u-eegisyo dhowr ah, oo aan si buuxda loo shaqeeyn.
Qorshaheyga dib uma uusan aheyn. Gaar ahaan kuwa soo socda FS2020 oo aan kor uga qaaday FSX ilaa P3DV4.5 wax kayar sanad ka hor.
Si kastaba ha noqotee, si aad ugu noqoto su'aashaada:
Laba jeer ayaan ku rakibay FSX iyo P3DV4.5 adigoo gujinaya labadooda. Horey bay u shaqeynaysay si fiican.
Si kastaba ha noqotee, haddii ay jiraan kala duwanaansho, waxaan u maleynayaa inaad sameyn kartid waxyaabaha soo socda:
Xullo rakib tilmaameedka ah.
Abuur tusaale ahaan meel ku meel gaar ah P3DGalka faylka loo yaqaan 'verocarft folder' iyo a P3DFaylka Duullimaadka V4 ee dukumiintiyada ama meel kasta oo aad ku urursan karto adigu P3D Soo dejisashada.
- Bilow safarka.
- Xullo rakibaadda gacanta
- Xullo P3DFaylka V5 haddii aad rabto inaad rakibto nooc V5 ah sidoo kale waxaad ku abuurtaa galka hoose ee galkaas oo leh magaca diyaaradda.
- In ka badan oo lagu rakibo galkaas gaarka ah.
- Intaa ka dib waxaad nuqul ka koobnaan kartaa waxyaabahaaga P3DWadada V5. (Maskaxda ku hay in waxyaabaha kujira galka sida codka / saamaynta / diyaarada iwm waxay u baahan yihiin in si kala duwan loo dhigo oo galka saxda ah loo dhigo)
Mar haddii aad nuqul ka sameysatid waxaad dib ugulaaban kartaa qaab la mid ah P3DV4.5 ama xitaa FSX. Ku rakibidda galkaaga ku meelgaarka ah ee meesha ku meelgaarka ah waa la tagi doonaa, laakiin nuquladaadu way sii jiri doonaan.
Tani waa xoogaa sida aan u rakibay moodooyinka qaarkood, maadaama aan u rogay qaar ka mid ah diyaaradaha wax yar oo aan jeclahay. Dhibaato ka yar markii ay tahay inaad dib u isticmaasho qalabka jilitaanka buuxa.
waafaqid P3DV4 et V5 Bilood 2 2 todobaad ka hor #1780
Waad ku mahadsan tahay jawaabtaada, laakiin waxaan u maleynayaa in cayayaanka sixika ah ay si fudud u sixi karaan kuwa abuuraya rakibahu markay tijaabiyaan xirmo hore oo xirmada ah.
Inta u dhaxaysa diyaaradaha, duruufaha, tamarta… Waxaan soo darsaday tobannaan xirmo oo hoos imanaya P3D V4.5.
Sidaad horey u sheegtay, buugaagta ku lugta leh kaliya maahan nooca simobject / diyaaradaha laakiin waa kuwa kale sida dhawaaqa, saameynta, cabbiraadaha ... asalka u ah rakibida nooca.
Haddii aan doorto in aan gacanta ku rakibo dhammaan xirmooyinkayga, waqtiga loo baahan yahay in la sameeyo waxay noqon lahayd xad-dhaaf ...
Tani waxay sharraxaysaa wicitaankayga ku saabsan taageerada.
Mar labaad waad mahadsan tihiin, hel duullimaadyo wanaagsan.
waafaqid P3DV4 et V5 Bilood 2 2 todobaad ka hor #1781
A wuu raaci karaa caqligaas, laakiin waxoogaa uun.
Waa inaad xasuusnaato in moodeeladaasi bilaash yihiin. Kooxda Rikooo waxay waqti badan ku qaataan sidii ay u cusbooneysiin lahaayeen isla markaana ula jaan qaadi lahaayeen moodelladaan isla markaana u diyaarin lahayn rakibo hal-guji ah oo aan isticmaali karno.
Waa bilaash, way fududahay. Booska yar ee naftaadu ma aha inay ahaato wax adag.
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.184